Ahoana ny fomba hanafenana ireo rindrambaiko novidiana ao amin'ny iOS 8 | Vaovao IPhone
Midika ny fahatongavan'i iOS 8 fomba vaovao hitantanana sy hizarana ireo rindram-baovaonay mividy amin'ny fianakaviantsika. iOS 8 dia mamela antsika hividy fampiharana hizara izany amin'ny fianakavianay, raha mbola misy io safidy io, satria tsy ny rindranasa rehetra no mifanaraka amin'ity fomba fitantanana fampiharana vaovao ity.
Ity safidy vaovao antsoina hoe En Familia ity, mamela ny fizarana fangatahana amin'ireo mpikambana rehetra ao amin'ny fianakavianay izay nampidirinay tamin'ny fitaovanay lehibe, izay tsy maintsy ampidirinay ny Apple ID miaraka amin'ny fahefan'ny fanapaha-kevitra ananany. Raha manisy marika ny vadintsika na ny vadinay ho Ray na Mpiambina izahay dia azon'izy ireo ekena ny fangatahana fividianana ireo zaza tafiditra ao aminy, na avy amin'ny iTunes, iBooks na amin'ny App Store.
Etsy ankilany, raha manana an'io marika io ho olon-dehibe fotsiny isika, Tsy afaka hanaiky ny karazana fividianana na fisintomana ianao. Amin'ity tranga ity, ny mpikarakara ny fianakaviana dia ho olona tokana afaka mankato ny fividianana na fisintomana rindranasa, mozika na boky. Mba hahafahan'ny mpikarakara mizara ny fividianana ny sisa amin'ny mpikambana dia tsy maintsy alefa ny takelaka Share my buying, ao anatin'ny safidin'ny mpampiasa.
Amin'ny maha mpikarakara ny vondrona anao, azontsika atao ny manakana ny rindranasa sasany ka tsy afaka misintona azy ireo ny mpianakavy hafaNa noho izy ireo tsy atolotra ho an'ny zaza tsy ampy taona, indrindra amin'ny lalao sasany, na satria tsy tianay hiditra amin'ny atiny asehon'izy ireo.
Raha te hanafina ireo rindranasa efa novidianay tamin'ny sisa amin'ny fianakaviana izahay dia mila fotsiny natokana ho an'ny App Store ao anatin'ny fitaovana ary kitiho ny fizarana novidiana, mba hiseho avokoa ireo rindranasa izay novidianay hatramin'ny namoronantsika ny kaonty Apple.
Manaraka izany dia tsy maintsy mandeha any amin'ilay rindranasa tiantsika hanafina sy hikorisa ny rantsan-tananantsika ho eo ankavia isika, mandra-pisehon'ny safidy Hide. Rehefa nafenina Amin'ny alàlan'ny fampiharana iTunes ihany no ahafahantsika mampiseho azy io amin'ny solosainantsika, ka raha iray amin'ireo mpampiasa mandany iTunes be dia be isika dia tsy maintsy mieritreritra mafy momba izay rindranasa tiantsika hanafina mandritra ny fotoana fohy na maharitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba hanafenana ireo apps novidiana ao amin'ny iOS 8
Very Inside, ny lalao mampatahotra novolavolain'i Amazon
[Lahatsary] Ny iPhone 6 vs. Galaxy S6 vs. HTC iray M9: fitsapana haingana